Ogaden News Agency (ONA) – Cunaqabatayn Dhaqaale oo lasaaray Cabdi UBO iyo kooxdisa u adeegta Woyanaha.
Cunaqabatayn Dhaqaale oo lasaaray Cabdi UBO iyo kooxdisa u adeegta Woyanaha.
Waayadanba waxaa socday shaki badan oo dhex yimid u adeegayasha gumeysiga Ethiopia wakiilka uga ah Ogadeniya iyo Woyanaha. Waxaana ONA horey idiinku soo tabisay in xayiraado badan la saaray howlihi ay qaban jireen iyada oo waliba ciidamo kasocda Addis ababa iyo sirdoonka Woyanuhu ay la baxeen cabdi UBO muddana ay soo heysteen.
Waxaa hadaba Xayiraadaha badan kamid ah in Cunaqabatayn si gaar ah loo saaray Dakhligii Miisaniyada ee Kililka uga iman jiray Addis Ababa. Miisaniyadaas oo inteeda badan ku magacowna arrimaha Nabad galyada, iyada oo qeybo yarna laga siin jiray Qandaraasleyda. lACAGAHAN oo intooda badan ay shaqsiyaad jeebka ku shuban jireen ayaa baadhitaano ay ku socodaan si taliska Ethiopia dad badan ugu eedeeyso musuq maasuq islamarkaasna loogu marmarsiyoodo si nidaamiyan ah xabsiyada loo dhiggo u adeegayaasha gumeysiga.
Suuqa magaalada Jig Jiga ayaa lacagahaasqeybo kamid ah lagu sarifi jiray laguna harqin jiray iyada oo dad aad u badan ay shaxaad iyo dhac dhac badan ka heli jireen lacagahaa musuq maasuqa lagagala baxo xafiisyada gumeysiga. Waxaana lagu soo waramayaa in lacagtii dhex ordi jirtay magaalada Jig Jiga aad u yaraatay ama lagaba waayay. Xafiisyadi gumeysigana aanba loo shaqo tagin maadama shaqadoodu aheyd badidood lacagahaas.
Suuqa magaalada Jig Jiga ayaa aad looga hadal hayaa lacagihi faraha badnaa sababta loo wayay iyaga oo ku sheegay dhowr arrimood oo kala gadisan:
Dad ayaa sheegaya in lacago badan la lunsaday iyada oo laga faa ideystay dhimashadii Zenawi oo keentay in haayadaha Gumeysiga Ethiopia oo dhan ay isku dhex yaaceen burburna la soo wajahay Taliskii gumeysiga. Sidaas awgeedna waxaa la lunsaday lacag badan oo dabagal lagu hayo.
Arrinta labaad ayaa lagu sheegaya inay tahay
waxaa jira walaca balaadhan oo gumaysigu ka qabo kooxda Abdi UBO oo ku jirta hardan iyo boos iska riixasho waxaana suura gal ah In ninba inta uu hayo la baxasado taas oo gumaysiga ku beertay walaaca xoogan loona hakiyey lacagatan ilaa xal laga gaadhayo kooxadan lana qoondenayo ninkii badali lahaa Cabdi Ubo ee misaaniyadan lagu aamin lahaa.
Mida kale ayaa lagu sheegaya inay kadanbeyso wadahadalada u furmay Ethiopia iyo Ururka ONLF. waxaa aan u maleynayna sababta loo hakiyay Miisaniyada kililka inay tahay Gumeysiga oo isbadal siyaasadeed raba innuu ka hirgaliyo Dhulka Ogaden si uu gogol xaadh ugu sameeyo wadahadalada ONLF iyo Ethiopia u bilaabanaya.
Sikastaba hanoqote waxaa walaac badan oo dhaqaale iyo dhan amniba so foodsaarantay u adeegayaashii Gumeysiga oo dad badan oo kamid ahina waayadanba kasoo fakanayeen. waxaa dad badan la aaminsanyahay in lagu soo eedeyn doono musuq maasuq iyo waxii lamid ah sida horeyba caadada ugu ahaan jirtay Gumeysiga.